Amasistimu weRubber Wheel | RayHaber
I-Izmir Sustainable Urban Logistics Plan yalungiswa; UMasipala wase-İzmir Metropolitan ulungiselele i-mzmir Sustainable Urban Logistics Plan (LOPİ) ngenhloso yokwenza ukuthutha kwabagibeli kanye nokuhamba ngezinyawo edolobheni ngokubheka amazinga ase-Europe kanye nenqubo yesayensi. Lopik, [Okuningi ...]
Isikhathi se-Visa seKhadi leDenizli labadala nabakhubazekile; Abakwa-65 abaneminyaka yobudala nangaphezulu ubudala, abahlengikazi nabazuza ngokomthetho abahlomula kwezokuhamba ezinikezwe nguMasipala waseDenizli Metropolitan [Okuningi ...]
Umhlangano wokuqala wabaphathi be-IETT nabashayeli abasebenza e-Private Public Bus wabanjelwa e-IETT Kagithane Garage. Umshayeli we-100 uchaze izinkinga zomshayeli futhi abaphathi be-IETT babhala amanothi. Izithuthi zomphakathi e-Istanbul [Okuningi ...]
Amashejuli Ebhasi lasebusuku lase-Antalya Ahlelwe kabusha; UMasipala wase-Antalya Metropolitan, ezokuhamba zomphakathi ngesikhathi sasebusika ukuvikela umphakathi wenze inkinga. Izimoto eziqala izindiza zasebusuku e23.00 ngesicelo esiqale [Okuningi ...]
I-ESHOT Ithatha Izinyathelo Zesimo Sezulu Sonke Sezulu; UMasipala wase-İzmir Metropolitan uTunç Soyer umemezele ukuthi: I-İzmir izonciphisa ukuphuma kwegesi okushisa komhlaba ngamaphesenti ama-2030 ngesimo sezulu se-40 Global sezulu siba sikhulu usuku nosuku [Okuningi ...]
I-ESHOT Call Center Ixazulula Inkinga Yezakhamuzi
I-ESHOT Call Center Ixazulula Inkinga Yezakhamizi; Cishe izicelo eziyinkulungwane ze-6 zenziwa esikhungweni sezingcingo se-ESHOT General Directorate. Amaphesenti we-82 wezicelo axazululwa ngokushesha. Izitha Zezingcingo ze-ESHOT [Okuningi ...]